Iibhayisekile kunye nokuHamba kwiCottage Dolgellau - I-Airbnb
Iibhayisekile kunye nokuHamba kwiCottage Dolgellau
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguJason & Michelle
UJason & Michelle yi-Superhost
Yemveli, isanda kulungiswa, imnandi, yamkelekile, yakhiwe kwidolophu entle yaseDolgellau. Ngaphantsi kweencopho eziphakamileyo zeCadair Idris kunye nokuqala kweMawddach Trail, idolophu ibonelela ngezinto ezininzi ezibandakanya ii-pubs, iindawo zokutyela, iivenkile zokutyela kunye neevenkile ezizimeleyo. Indawo egqibeleleyo yokuphonononga iPaki yeSizwe ye-Snowdonia, kubandakanya iiLwandle ezithandekayo, iCoed Y Brenin Mountain Bike Trail, iiNdawo zeTrasti zeSizwe, iZip World kunye nokunye okuninzi onokuzonwabela.
Indlu epholileyo enezitovu ezivuthayo kunye nokubonelela ngesicwangciso esivulekileyo sokuhlala / sokutyela / ikhitshi kumgangatho ophantsi. Itafile yokutyela yehlamvu izihlalo ezine kwaye yenza indawo eluncedo kwabo banqwenela ukusebenza kwilaptop okanye badlale imidlalo yebhodi kunye namakhadi. Igumbi lokulala elikumgangatho wokuqala libonelela ngebhedi ephindwe kabini kwaye eyakhelwe kwiwadi yokugcina impahla. Kumgangatho wokuqala kukho igumbi lokuhlambela elinendawo yokuhlambela enobungakanani bokuhamba kwishawari. Izitebhisi zinyukela kumgangatho wesibini kwigumbi le-attic elikhanyayo nelinomoya elineebhedi ezimbini ezingatshatanga, indawo yokugcina idrowa kunye nomzila kaloliwe ojingayo. Iimbono ezisuka kweli gumbi ukuya eCadair Idris ziyamangalisa.
Iilogi ezixhasayo kunye namalahle zibonelelwa ngobo busuku bupholileyo.
Akukho kuPaka kuvunyelwe ngaphandle kwepropathi. Nangona kunjalo, iindwendwe zivumelekile ukuba zikhuphe kwaye zilayishe kuphela. Iphepha-mvume lokuPaka libonelelwe ngesithuthi esinye eLong Stay Car Park e-Dolgellau, kufutshane neKlabhu yombhoxo, ekumgama omalunga nemizuzu emi-3 ukuhamba.
Izitebhisi zinyuka, umlenze wenja kunye namanyathelo aphezulu angaphandle ngokuthe ngqo kumagumbi okulala, okwenza ukuba angafaneleki kubantwana abancinci kakhulu.
Izilwanyana zasekhaya zivumelekile kwaye ipropathi ifanelekile kwi-2 x izinja ezincinci / eziphakathi. Iindwendwe ziyacelwa ukuba zingavumeli izinja ukuba zibe kumgangatho ophezulu kwaye zibonelele ngezazo iibhedi kunye neetawuli. Izitya zezinja kunye nempatho encomekayo kunye neengxowa ze-poop ziyafumaneka.
I-cellar inika indawo yokugcina ekhuselekileyo ukuya kwiibhayisikili ezi-4 kunye nendawo yokomisa emva kwezo ntsuku zisebenzayo ngaphandle kweholide yakho.
Umbuki zindwendwe ngu- Jason & Michelle
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Dolgellau